एमसीसीलाई थप बजेट दिन ओलीको निर्देशन, एक अर्ब ९ करोड खर्च भैसक्यो, अझै कति ? « LiveMandu
एमसीसीलाई थप बजेट दिन ओलीको निर्देशन, एक अर्ब ९ करोड खर्च भैसक्यो, अझै कति ?
१५ बैशाख २०७८, बुधबार २१:५९
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको छ । बहु चर्चित तथा विवादास्पद अमेरिकी परियोजना एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।
बैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पैसाका अभाव हुन नदिनु भनि निर्देशन दिएका थिए ।
एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय स‌सदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजनामा हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समाप्तिसम्म १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको हो ।
सत्तारूढ नेकपाभित्र नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने विषय उत्कर्षमा थियो । पार्टी विभाजनको मुल कारणको रूपमा पनि एमसीसीलाई नै हेर्ने गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम निर्माण सम्झौता हुने चरणमा छ । परियोजनाका लागि सफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रियामा छ । मन्त्रालयले रातमाटे सवस्टेसनको लागि जग्गाप्राप्तिको भूक्तानी चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरिएको छ । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा उर्जा र सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।